watchOS 5 beta 10 uye tvOS 12 yakaburitswa yevanogadzira | Ndinobva mac
Masikati ano mushure mekuburitswa kwe beta vhezheni yegumi nembiri kugadzirisa dambudziko re "pop-up" raigara richitanga pamidziyo yeIOS, vakomana veCupertino vakatanga chirongwa nyowani beta vhezheni yewatchOS 5 uye tvOS 12 vagadziri. Mune ino kesi ndeye yegumi vhezheni.
Iyo inotipa isu kunzwa kuti ndeye vhezheni yekuperekedza vamwe vese pane kuwedzera zvigadziriso, kunyange zviri pachena shanduko dzakawedzerwa kwavari kuvandudza mashandiro, chengetedzo uye kugadzikana kweiyo OS. Apple ine kuburitswa kwekupedzisira kweshanduro dzese dzepamutemo kukandwa kwedombo uye iwe unoda kuti dzive nemabhugi mashoma sezvinobvira.
Mubvunzo mune idzi dzese beta shanduro ndeyekuti vanozosvika pamberi kana mushure meiyo mharidzo yeinotevera 12 Gunyana, sezvo zvitsva izvo zvinogona kuitiswa kubva pano kuenda kune yekupedzisira vhezheni zviri zvishoma. Vagadziri vatove neaya mabetas akaiswa pamakomputa avo kwenguva yakareba uye zvinoita sekunge vane zvipembenene zvishoma kana zvirinani izvo zvavanazvo zvinogadziriswa nema betas anotevera.
Dambudziko rakakomba mune mabetas eiyo OS itsva pasina mubvunzo anga ari ekupedzisira eIOS, ine meseji inogara ichinyevera nezve kugadzirisa. Pakupedzisira Apple yakaigadzirisa mumaawa mashoma neiyo nyowani beta vhezheni uye zvinoita sekunge tichava nezvimwe kusvikira shanduro dzekupedzisira dzasvika mwedzi unouya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 5 beta 10 uye tvOS 12 yakaburitswa yevanogadzira
vGuru Vhidhiyo Player, yakabhadharwa imwe nzira kuVLC